Somaliland: Siyaasiyiin Kasoo Jeeda Bariga Burco Oo Ex. Wasiir Xirsi Uga Digay Xajiimayn Uu Beeshooda Kula Dhex Jiro - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Siyaasiyiin Kasoo Jeeda Bariga Burco Oo Ex. Wasiir Xirsi Uga Digay...
“Xirso-ow shalay markii aad xabxablaha ahayd Muuse Duuliye diyaaradeed buu ahaaye kasuoo habsaamin inaad ku dherersatona ma ah.”Siyaasi Dhuux Cabdilaahi
Waxgarad, cuqaal iyo siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanka Qorilugud ee gobolka Buuhoodle, ayaa eedo kulul u jeediyey wasiirkii hore ee madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo dhawaanahan warbaahinta hadallo deelqaaf ah kaga tiraabayey.
Xubnaha reer Qorilugud oo hutel Xaraf ee magaalada Hargeysa saxaafadda kula hadlay, ayaa Ex. Wasiir Xirsi ku eedeeyey inuu dhibaato iyo qabyaalad kula dhex jiro beeshooda, waxana ay uga digeen inuu sii wado isku dayada uu beesha ku kala qaybinayo.
Dhuux Cabdilaahi Cabdi oo kamid ah saraakiishii madasha ka hadlay, ayaa luuqada adag kula hadlay ex. Wasiir Xirsi, waxana uu shaaca ka qaaday inaanay beesha Solomadow oo ay dhalasho ahaan kasoo jeedaan geyin warxumo-tashiilka uu Xirsi ka faafinayo, waxana uu tilmaamay inay beeshu si midaysan u taageersan tahay xisbul-xaakimka KULMIYE, “Xirso-ow maanta adiga oo cumaamad madaxa ku duuban oo tollo’ay yaa reer hebeleey leh inaad na dhex timaaddo adigana waa kuu nusqaan beeshana waa ku nusqaan” ayuu yidhi Dhuux Cabdilaahi.
Dhuux sidoo kale jawaab adag ka bixiyey eedamaymo uu Ex. Wasiir Xirsi dhawaan u jeediyey guddoomiye Muuse Biixi Cabdi, waxana isaga oo is-barbar dhig u samaynaya labada masuul uu yidhi, “Xirso-ow shalay markii aad xabxablaha ahayd Muuse Duuliye diyaaradeed buu ahaaye kasuoo habsaamin inaad ku dherersatona ma ah.”